नयाँ वर्षको नयाँ अनुभव - Balsirjana
नयाँ वर्षको नयाँ अनुभव
बालसिर्जना संवाददाता २९ साउन २०७७, बिहीवार
भाइबहिनीहरू ! सधैं नयाँ वर्षको शुभारम्भमा विद्यालय बन्द हुन्थ्यो । नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने अवसर पाइन्थ्यो । नयाँ झोलामा किताव कापी बोकेर, नयाँ नयाँ ड्रेस लगाएर, नयाँ जुत्ता लगाएर नयाँ कक्षामा जाने बेला हो तर बन्दाबन्दीका कारण यी सबै कुरा हुन पाएनन् । बरु हामी सबै जना घरको चौघेरामा बाँधिएर बस्नु परेको छ । माथिल्लो कक्षामा पुगेर धेरै नयाँ साथीहरूसँग परिचित हुने अवसर कहिले आउला भन्न सकिने अवस्था नै छैन । यो २०७७ साल त अचम्मको वर्ष पो हुने भो त ।
भाइबहिनीहरू ! कसैले कुन स्कूलमा पढ्छौ भन्यो भने पनि कुन स्कूलमा पढ्छु भनौं होला भन्ने भैसक्यो । स्कूलको रिजल्ट पनि पाइएको छैन । नयाँ किताब कस्ता आए त्यो पनि थाहा छैन । कक्षामा शिक्षकले पढाउँदा अबको वर्षदेखि नयाँ पाठ्यपुस्तक आउँछन् भन्नु हुन्थ्यो । खोइ कस्ता पाठ्यपुस्तक आए भन्ने पनि थाहा छैन । कसरी स्कूल शुरु होलान् त्यो पनि थाहा छैन । सरकारले त भन्न सकेको छैन कहिलेदेखि कक्षा शुरु हुने भनेर हामी त समाचार सुन्ने र बस्ने मात्र त हो ।
भाइबहिनीहरू ! सधैं बिहान उठेपछि स्कूल दौडिन हतार हुन्थ्यो अहिले त जति बेला उठे पनि भयो । जति बेला खाए पनि भयो । सबैभन्दा मजा त टेलिभिजन र कम्प्युटरमा भुलिराख्दा पनि कसैले गालि गदैनन् । गृहकार्यको चिन्ता पनि छैन । मानिसको जीवन नयाँ नयाँ अनुभव र सिकाइमा बिताउनका लागि हो तर यस पटक त कहिल्यै कल्पना नगरेको नयाँ अनुभव पो भयो त ।
पछिल्लाे - एउटै टोलका साथीहरू पनि परदेशी जस्ता भए है !
अघिल्लाे - त्रि‍‍ वि ले परीक्षाा स्थगित गर्ने निर्नय गर्याे
कोइलीको मिठो गीत
बसन्तको बेलामा वनमा रमाउने चरी । मिठो गीत गाई मुग्ध बनाउछिन् कोइली...
आमा तिम्रो सरल मुटुको स्नेह छोडेर आएँ साहूजीको ऋण तिरिदिने लक्ष्य राखेर...
एउटा गाउँमा एउटा केटो बस्थ्यो । ऊ ज्यादै सङ्घर्ष गथ्र्यो तर उसका...
स्टेथेस्कोप भनेको के हो ?
स्टेस्थेस्कोप एउटा चिकित्सकीय यन्त्र हो । यसको आविष्कार सन् १८१६ मा फ्रान्सका...
गुरुको सम्मान गर्नै पर्छ र ?
भाइबहिनीहरू ! असारको शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ । गुरु पूर्णिमाका...
बालबालिकाको संबद्र्धन गरौं
विश्वमा बालबालिकाका क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू भैसकेका छन् । बालबालिका भनेका समाजका अभिन्न...